कस्तो छ तपाईंको माघ महिनाको राशिफल ? - kageshworikhabar.com
कस्तो छ तपाईंको माघ महिनाको राशिफल ?
वि स २०७७ साल माघ महिनाको राशिफल ।
महिनाभर राज्य भावमा गोचर गर्ने सूर्यले राजनीतिकर्मि तथा कुटनीतिको क्षेत्रमा समय लगानी गर्नेहरुले उच्च पद पाउने गतिलो योग रहेकोछ । नीति निर्माण तहमा तपाईंको सम्मानजनक उपस्थिती रहने छ । यो महिनामा गरिने निर्णयहरु सबैलाई मान्य हुनेछ । प्रसाशनिक क्षेत्रमा सामेल भई सामाजिक काम गर्ने अवसर प्राप्त हुने हुँदा मान सम्मान तथा ईज्जत प्रतिष्ठामा बृद्धि भएर जानेछ ।
कला साहित्य तथा गित संगितमा बिषेश रुचि बढ्नेछ । पारिवारिक जमघटमा सहभागी भई मिठो मसिनो भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । व्यापार व्यवसायमा समय लगानी गर्ने व्यापारीहरुका लागी समय उत्तम रहेको छ । पराक्रमी क्रिर्याकलापमा भाग लिनेहरुले नाम तथा दाम दुवै कमाउन सक्नेछन् । माता पिता तथा अग्रबाट आशिर्वाद तथा सहयोग पाईनेछ ।
पढाइ लेखाइमा प्रतिस्पर्धी हरुलाई किनारा लगाउँदै नतिजा आफ्नो पोल्टोमा पार्न सकिने छ। राजनीति शास्त्र अध्ययन गर्नेहरुका लागि समय राम्रो रहेको छ । पति पत्नी बीचको सम्बन्ध सुदृड हुनुको साथै माया प्रेमको गाँठो कसिलो भएर जानेछ । जग्गा जमीनको कारोबार गर्नेहरुका लागी समय उत्तम रहनेछ ।
बृष (ईऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) :
भाग्य भावमा महिनाभर नै गोचर गर्ने सूर्यको प्रतिकुल प्रभावको कारणले औषधिजन्य तथा खाद्यान्नसँग सम्बन्धित व्यापारमा वृद्धि भएपनि अन्य व्यापारमा मन्दी आउनेछ । श्वासप्रश्वास,आँखा,टाउको सम्बन्धि समस्या आउने सम्भावना रहेको छ । घर गृहस्थीमा व्यावहारिक कुरा नमिल्दा केही असहज परिस्थितिको सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न । दीर्घरोग जस्तै प्रेसर,सुगर जस्ता रोगीहरुले बिषेश ख्याल गर्नुहोला ।
बृहस्पती तथा शुक्र र अन्य ग्रहको अनुकुल प्रभावले गितकार,संगितकार तथा साहित्यको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुका लागी समय फलदायी रहनेछ । माया प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागी महिना मिश्रित रहेको छ । आफन्त तथा दाजुभाईको सहयोग रहने छ। छोटो दुरिको रमाईलो यात्राको तय हुनेछ । बैंक तथा बित्तिय क्षेत्रसँग सम्बन्धीत कामबाट मनग्गे धन लाभ हुनेछ । सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना विचारहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ ।
तरपनि संघर्षका बावजुद,राजनीति तथा समाजसेवामा समय लगानि गर्नेहरुका लागि राज्यबाट पद प्राप्तीको योग रहेको छ । सरकारी जागिरेहरुले बढुवा तथा सुगम स्थानमा स्थानान्तरणको प्रशस्त सम्भावना रहेकोछ । ठुलाबढा तथा विशिष्ट व्याक्तिहरुको आशिर्वाद पाईने हुँदा मन प्रशन्न हुनेछ ।
महिनाभर कष्ट भावमा गोचर गर्ने सूर्यले श्वासप्रश्वास,आँखा,टाउको सम्बन्धी समस्या आउने सम्भावना रहेको छ । स्थाई सम्पतीमा बिवाद आउने योग रहेकोछ भने दिदि बहिनी तथा आफन्तसँग अनावश्यक विवाद हुनेछ । घर परिवारका आफन्तको स्वास्यमा समस्या आई औषधी उपचार खर्च बढेर जानेछ । दीर्घरोग जस्तै प्रेसर,सुगर जस्ता रोगीहरुले बिषेश ख्याल गर्नुहोला । राजनीति तथा समाजसेवामा तपाईंको उपश्थिती कमजोर रहनेछ ।
शनिको अढैया प्रभावले दीर्घरोग जस्तै प्रेसर,सुगर,नसा सम्बन्धी समस्या भएकाहरु र प्यारालाईशिष सम्बन्धि समस्या भएकाहरुले विशेष ध्यान दिनुहोला । सवारी साधनको तथा भौतिक सम्पतीको प्रयोग गर्दा ध्यान नदिए अप्रिय घट्ना नहोला भन्न सकिन्छ । नसोचेको धन तथा भौतिक सम्पती प्राप्त हुनेछ । कृषि तथा पशुपालन,बैंक तथा बित्तिय क्षेत्रमा गरिएको लगानिबाट मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ ।
महिनाभर नै व्यापार भावमा गोचर गर्ने कमजोर सूर्यले राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको आलोचनात्मक समर्थन रहनेछ । आर्थिक अपचलनको मुद्दा लाग्न सक्छ ध्यान दिनुहोला । घर परिवार तथा जीवन साथिसँग राय बाजिनेछ । साझेदारी व्यावसायमा लगानी गर्नेहरुका लागी यो महिना साझेदारहरु बीच मनमुटाब बढ्ने योग रहेकोछ ।
तरपनि अन्य ग्रहको अनुकुल प्रभावले थोरै स्रोत साधनको प्रयोगबाट असिमित आवश्यकताहरु पुरा गर्न सकिने हुनाले मन प्रशन्न रहने छ । छोटो वा लामो दुरिको धार्मिक तथा शैक्षिक यात्राको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । शुभ तथा मांगलिक सभा समारोहमा आफन्त तथा साथिहरुसँग सहभागि भई मिठा परिकार खाँदै रमाईलो गफ गरेर महिना कटाउन सकिनेछ ।
अग्रज तथा आफन्तको आशिर्वादले अगाडि बढ्न प्रोत्साहन गर्नेछ । पढाइ लेखाइ सुधार भएर जानेछ भने कुनैपनि प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीहरुलाई सजिलै हराउन सकिनेछ । अग्रज तथा आफन्तबाट आशिर्वाद प्राप्त हुनेछ ।
छैटौं भावमा महिनाभर नै गोचर गर्ने सूर्यले अदालत तथा न्यायलयबाट हुने निर्णयहरु तपाईंकै पक्षमा आउने हुँदा मन प्रशन्न हुनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको गतिलो समर्थन रहने छ। पद प्राप्तीको योग रहेकोछ । साहसी काम गरेर अरुको मन जित्न सकिनेछ भने प्रतिस्पर्धीहरु पनि सहयोगी बन्नेछन् ।
नोकरीमा हुने प्रतिस्पर्धामा तपाईंको नाम अग्र स्थानमा आउने छ । माता पिता तथा मावली पक्षबाट आशिर्वाद पाईनेछ । बाधा बिरोध गर्नेहरु आफै किनारा लाग्नेछन् । थाति रहेको तथा अल्झेर बसेका काम धन्दाहरु नियमित रुपमा सुचारु हुँदा काम गर्न जोस जागर बढेर आउनेछ ।
पढाइ लेखाइमा प्रविधिको प्रयोग गरि अरुलाई पछाडि छोड्दै तपाईंको नाम अग्र स्थानमा आउनेछ । प्रेम बन्धनमा बाधिने गतिलो सम्भावना रहेको छ भने छुट्टिएका प्रेम सम्बन्धहरु पुनर्मिलन हुने प्रशस्त सम्भावा रहेको छ । खनिज पदार्थ,खाद्यान्न, औषधि तथा निर्माण सामाग्रीको व्यापार फस्टाएर जानेछ ।
कन्या (टो,पा,पी,पु,ष,ण,ठ,पे,पो) :
सन्तान तथा विद्या भावमा महिनाभर सूर्यको प्रभावले शेयर बजार तथा आर्थिक क्षेत्रमा गरिएको लगानी खस्केर जानेछ । पेट,आँखा तथा टाउकोमा समस्या आई औषधी उपचार खर्च बढ्नेछ । सन्तान तथा आफन्तसँग मनमुटाब बढ्नेछ । अध्ययनमा भनेजस्तो प्रगती गर्न नसकिएपनि प्रविधिको प्रयोग गरि निरन्तरता दिन सकिनेछ । दिर्घरोगि जस्तै सुगर,प्रेसर र मुटु सम्बन्धी समस्या भएकाहरुका लागी महिना मध्यम रहेको छ ।
तरपनि महिनाभर नै बुध,शुक्र,मंगल र बृहस्पतिको प्रभाव भने अनुकुल हुनेछ । अग्रज तथा आफन्तबाट टिका तथा आशिर्वाद पाईनेछ । राज्य संयन्त्रको नजिक जस्तै निजामती,फौजि तथा सस्थानमा र प्राईबेट कम्पनिहरुका काम गर्नेहरका लागी समयले साथ दिनेछ । लेखन कलाको माध्यमबाट आफ्नो विचारहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ ।
भौतिक तथा विलाशी वस्तुको कारोबार गर्नेहरुले मनग्गे धन सम्पती जोड्न सक्नेछन । उपहार तथा चिठ्ठा प्राप्तीको गतिलो योग रहेको छ । अध्ययन तथा कामको शिलशिलामा लामो दुरिको यात्राको तय हुनेछ ।
सुख भावमा महिनाभर सूर्यको प्रभावले आफ्नो वा आमाको स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ ध्यान दिनुहोला । भौतिक सम्पती तथा सवारी साधनको कारोबार गर्दा ध्यान दिनुहोला । महिनाभर नै शनिको अढैयाको प्रभाप रहने हुनाले सवारी साधन तथा माटोसम्बन्धी काम गर्दा ख्याल गर्नुहोला । रुपैंया पैसा डुब्ने र सवारी साधनको प्रयोग गर्दा अप्रिय घट्ना नघट्ला भन्न सकिन्न ।
राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको समर्थन पाउन निकै नै मेहनेत गर्नुपर्ने भएकोले राजनीतिकर्मि,समाजसेवी तथा घर जग्गाको कारोबार गर्ने व्यापारीहरुका लागि समय मध्यम रहेकोछ । तरपनी महिनाभर नै बुध,शुक्र तथा मंगलको प्रभाव भने अनुकुल हुनेछ । प्राकृतिक स्रोत र पैत्रिक धन तथा सम्पतीको प्रयोग मार्फत आम्दानी बढाउन सकिनेछ ।
लेखन कलाको माध्ययमबाट आफ्नो बिचारहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ । भौतिक तथा विलाशी वस्तुको कारोबार गर्नेहरुका लागि मनग्गे धन सम्पति जोड्न सकिने समय रहेकोछ ।सुख भावमा गोचर बृहस्पती र अन्य ग्रहको शुभ प्रभाव रहने हुनाले औषधीजन्य तथा खाद्यान्न र निर्माण सामाग्रीसँग सम्वन्धीत सामानको खरिद बिक्रीमा उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ ।
बृश्चिक राशि भएका व्याक्तिहरुका लागी यो महिना समय उत्तम रहेको छ । सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना विचारहरु जनमानसमा लैजान सकिने छ । अन्धबिश्वास तथा कुसंस्कार बिरुद्ध कलम चलाई समाजलाई शिक्षित पार्न तपाईंको लेखन कलाले महत्वपुर्ण भमिका निर्बाह गर्नेछ । आफन्त तथा अग्रजबाट आशिर्वाद प्राप्त हुनेछ ।
खेलाडी तथा पराक्रमी क्रिर्याकलापमा समय लगानी गर्नेहरुले प्रशस्त धन तथा सम्पती संग्रह गर्नेछन् । मुद्दा मामिला तथा न्यालयबाट हुने न्याय सम्पादन तपाईंकै पक्षमा हुनेछन् । राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको साथ तथा समर्थन प्राप्त हुने हुँदा राजनीतिकर्मि तथा कुटनीतिको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुका लागी समय उत्तम रहेको छ ।
विद्यामा सफलता प्राप्त हुनेछ भने छोटो तथा रमाईलो यात्राको तय हुनेछ । जीवन शैलिमा सुधार हुनुको साथै समयको महत्व बुझ्दा अगाडि बढ्न सहज हुनेछ । दाजुभाई तथा छिमेकिसँग गरिने व्यवसाय फस्टाएर जाने हुनाले प्रशस्त नाँफा कमाउन सकिने छ। अरुलाई प्रभाबित पारेर सजिलै काम लिन सकिनेछ । बादबिवाद तथा प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धी हरुलाई सजिलै हराएर अगाडि बढ्न सकिनेछ । माया प्रेमका सम्बन्धहरु विवाहमा परिणत गर्ने सहमति जुट्नेछ ।
दोस्रो भावमा गोचर गरिरहेको सूर्यको प्रतिकुल प्रभावले टाउको,आँखा तथा पेट तथा छात्ती सम्बन्धी समस्याले नसताउला भन्न सकिन्न । होटल तथा रेष्टुरेन्टको क्षेत्रमा मन्दी आउनेछ । आउने अवसरहरुलाई पहिचान गर्न नसस्दा उपलब्धी हातबाट फुत्किनेछ । धन सम्पती हराउने,लुटिने तथा स्थाई सम्पतिमा बिवाद हुन सक्छ ।
त्यस्तै शनिको अन्त्य साढेसातीको प्रभाव महिना भरनै रहनेछ । आफन्त तथा कुटुम्बसँग सामान्य मनमुटाब सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न । शरिरमा आलश्य तथा अल्छीपना बढेर जानेछ । खानपान तथा बाहिरी वातावरणको ध्यान दिनुहोला । नशा,प्यारालाईशिस,ग्याष्ट्रिक तथा दीर्घ रोगीहरुले बिषेश ख्याल गर्नुहोला ।
तरपनी बुध,शुक्र र मंगलको अनुकुल प्रभावले साहित्य लेखन तथा संगीतको क्षेत्रमा निखारता आउने तथा बिशेष उपलब्धि हाँसिल हुनेछ । न्यायिक क्षेत्रमा काम गर्ने न्याधिस,अधिवक्ता तथा नोकरिमा प्रतिस्पर्धा गर्नेहरुका लागी समय फलदायी रहने छ । भौतिक वस्तु तथा सवारी साधनको कारोबार फस्टाएर जाने छ । धन भावमा भएको बृहस्पतीको अनुकुल प्रभावले उत्पादनमूखी,औषधीजन्य तथा शैक्षिक क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ ।
विदेशी लगानिबाट सञ्चालित संस्थामा काम पाउने गतिलो सम्भावना रहेको छ । धार्मिक तथा शैक्षिक यात्राको गतिलो योग रहेको छ। विदेशमा बसेर पेशा व्यवसाय गर्नेहरुका लागि समय उत्तम रहेको छ । माया प्रेममा मनमुटाब सिर्जना भएपनि अन्तत एक अर्काको भावना बुझेर सम्बन्धलाई सुधार गर्दै लैजान सकिनेछ ।
यो महिना शनिको मध्य शाढेसातीको प्रभाव महिना भरनै रहने हुनाले स्वास्थ्यमा बिशेष गरी उच्च रक्तचाप,टाउँको दुखाई,छात्ती,आँखा तथा मौसमी रोगले सताउने तथा मेडिकल खर्च बढेर जाने योग रहेको छ । शरिरमा आलश्य तथा अल्छीपना बढेर जानेछ । खानपान तथा बाहिरी वातावरणको ध्यान दिनुहोला । पेट सम्बन्धी समस्या नआउला भन्न सकिन्न । आम्दानि र खर्चको अनुपात मिलाउन नसक्दा दैनिकी प्रभावित हुनेछ ।
व्यापार व्यवसायमा मन्दी आउनाले खल्ति रित्तिनेछ । आफन्त तथा अग्रज हरुसँग सानो सानो बिषयमा बिवाद सिर्जना हुने योग रहेकोछ । कामहरु समयमा सम्पन्न नहुने तथा गल्ति गर्नाले दण्ड तथा जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन सक्छ ध्यान दिनुहोला ।
तरपनी अन्य ग्रहको अनुकुल प्रभावले परराष्ट्र तथा कुटनीतिको क्ष्ँेत्रमा काम गर्नेहरुका लागि समयले साथ दिनेछ ।
राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको गतिलो समर्थन पाईने हुनाले पद प्राप्तीको योग रहेकोछ । धार्मिक तथा शैक्षिक यात्राको गतिलो योग रहेकोछ भने विदेशमा बसेर पेशा व्यावसाय गर्नेहरुका लागी समय उत्तम रहेकोछ । औषधि,निर्माण सामग्री र दैनिक उपभोग्य बस्तुको कारोबारमा बृद्धि हुनेछ ।
खर्च भावमा गोचर गर्ने सूर्यको प्रभावले आम्दानिको तुलानामा खर्च अधिक हुने हुँदा दैनिकी नराम्ररी गरि प्रभावित हुनेछ । राज्यको नजिक रहि काम गर्नेहरुले काममा ढिला सुस्ति तथा काम बिग्रने हुँदा राज्यलाई दण्ड जरिवाना तिुर्नु पर्ने हुन सक्छ। राज्यको नुन खाएकाहरुले नियम संगत काम गर्न नसक्दा नोकरीमा असजिलो परिस्थितिको सामना गर्नु पर्नेछ । यात्रा गर्दा वा सवारी साधनको प्रयोग तथा परिचालन गर्दा ख्याल गर्नुहोला । व्यावहारिक तथा आर्थिक उतारचडाव आउनेछ ।
महिनाभर नै शनिको आद्य साढेसातिको प्रभाव रहने छ, जसको कारणले आफन्त तथा कुटुम्बसँग घरायसी कुरामा राय बाजिनेछ । शरिरमा आलश्य तथा अल्छीपना बढेर जानेछ । आफ्नो वा आफन्तको स्वास्थ्यमा समस्या आई औषधी उपचार खर्च बढेर जानेछ । खानपान तथा बाहिरी बाताबरणको ध्यान दिनुहोला । नशा,प्यारालाईशिस,ग्याष्ट्रिक तथा दीर्घ रोगीहरुले बिषेश ख्याल गर्नुहोला ।
तरपनी बुध,बृहस्पती,मंगल तथा शुक्रका अनुकुल प्रभावले लामो समयदेखी बन्द रहेका उद्योगहरु सुचारु गर्न सकिनेछ । आफन्त तथा अग्रबाट आशिर्वाद प्राप्त हुनेछ । सवारी साधनको कारोबारबाट मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ । विद्यार्थी तथा शिक्षा पेशामा लागेका व्यक्तिहरुका लागी समय लाभदायी बन्नेछ । यात्रा हुनेछ भने विदेशमा बसेर समय लगानि गर्नेहरुका लागी समम फलदायी रहनेछ ।
विदेशी सामानको व्यापार गर्ने व्यापारीहरुका लागी समय उत्तम रहेको छ । प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गरि मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ ।प्रेममा रहेकोहरुका लागी आफन्त तथा परिवारका सदस्यबाट वैधानिकता प्राप्त हुनेछ । माया प्रेममा नजिक हुन सकिने तथा जीवन साथिको सहयोगले राम्रा तथा परिणामूखी कार्य सकिनेछ ।
महिना भर लाभ भावमा गोचर गर्ने सूर्य र अन्य ग्रहको अनुकुल प्रभाव रहनेछ । समाजमा राम्रा काम गर्न सकिने हुनाले उचाई बढ्नेछ। मान सम्मान ईज्जत प्रतिष्ठामा बृद्धि भएर जानेछ । राजनीतिकर्मि,खेलाडी,पत्रकार तथा बिद्यार्थीहरुका लागी समय उत्तम रहेकोछ । नोकरी पाउने तथा पदोन्नतीको गतिलो योग रहेकोछ । अग्रज तथा आफन्तबाट तपाईंको काममा सहयोग तथा आशिर्वाद पाईनेछ ।
व्यापार व्यवसायमा लगानी गरी मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ भने प्राकृतिक स्रोत साधन जस्तै खनिज पदार्थ,तरल पदार्थको कारोबारबाट मनग्गे धन सम्पती आर्जन गर्न सकिनेछ । आकश्मिक लाभ तथा आभुषण प्राप्तीको गतिलो योग रहेको छ। तपाईंको कार्यकुसलताको सबैले तारिफ गर्नेछन् । कुटुम्ब तथा आफन्तबाट धन तथा सम्पती लाभ हुने ग्रहयोग रहेको छ । मेलमिलाप तथा भाईचाराको सम्बन्ध स्थापनमा तपाईंको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ ।
पैत्रिक धन तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गरी समाजमा दाम तथा नाम दुवै कमाउन सकिनेछ । माया प्रेममा नजिक हुन सकिने तथा जीवन साथिको सहयोगले राम्रा तथा परिणाममखि कार्य सकिने छ । शुक्र र बुधको अनुकुल प्रभावले लेखन कला तथा साहित्य क्षेत्रमा समय लगानि गर्नेहरुका लागी समय फलदायी रहनेछ ।
Previous articleप्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको रहर नभई बाध्यता : नेता अधिकारी
Next articleकोभिड–१९ पछि योगको थप महत्व र सान्दर्भिकता बढ्यो : प्रधानमन्त्री ओली